झोलुंगे पुलबाट घरधुरी लाभान्वित, घुमाउरो बाटोबाट छुट्कारा
म्याग्दी । दुर्गम पहाडी जिल्ला म्याग्दीमा यस वर्ष झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ । ११ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि विकट बस्तीका बासिन्दालाई घुमाउरो बाटोबाट समेत छुट्कारा पाइएको छ । साथै दुई हजार ५०० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्
रु. दुई करोड ७९ लाख ९० हजार १०० को लागतमा बनेको सो पुल २०७५ वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । यसबाट बेग र बादुक गाउँका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न डेढ घण्टा घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने समस्या हट्नुका साथै पर्यटकको चहलपहल बढेको वडाध्यक्ष बिलबहादुर फगामीले बताउनुभयो । अन्य १० वटा पुल जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, झोलुंगे पुल सहयोग कार्यक्रम (टिबीएसयु), स्वाप, स्थानीय तह, समुदाय र गैरसरकारी संस्था मिलन म्याग्दीको सहकार्यमा निर्माण भएका हुन् ।
रु. तीन करोड चार लाख ३९ हजार ४६४ लगानीमा निर्माण भएका १० वटा झोलुंगे पुलबाट दुई हजार ५०३ घरधुरीका १४ हजार ५४६ जनसंख्या लाभान्वित भएका मिलन म्याग्दीका प्राविधिक विष्णु पन्तले जानकारी दिनुभयो । धौलागिरि गाउँपालिका–४, जेल्तुङमा १०२ मिटर, धनमानेमा ५९ मिटर र छहरी खोलामा ३२ मिटर लामो ट्रस पुल निर्माण भएको छ । मालिका गाउँपालिकाको टाक्सेमा ६४, नुनथलामा ४५.७५, दोविल्नामा ६४, दाङखोलामा ६७ मिटर लामा झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन् ।